अस्ट्रेलियामा २२ वर्ष बसेका एक भारतीय व्यक्ति नागरिकताको लागि अयोग्य - AusMandu
The main intention of Ausmandu is to provide information, entertainment and inspiration. It is run by young minds and may have some lackings, your valuable suggestions are highly appreciated. Throw us an Email: info[email protected]
By Ausmandu On Aug 18, 2018
भारतका एक व्यक्ति अस्ट्रेलियामा २२ वर्षसम्म बसेर पनि नागरिकताको लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । नाम नखुलाइएका ती व्यक्ति सन् १९९६ मा अस्ट्रेलिया आएका थिए । त्यसपछि सन् २०११ को मे महिनामा उनले पीआर पाए ।
उनका तीन सन्तानले यहाँको नागरिकता पाइसकेका छन् । तर ती सन्तानलाई जन्माएर हुर्काएका, परिवारलाई अस्ट्रेलियामा स्थापित गराएका उनी आफू भने नागरिकताको लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । उनले सन् २०१७ को फेब्रुअरी महिनामा नागरिकताको लागि आवेदन दिएका थिए ।
एक रेस्टुरेन्टमा सेफको काम गर्ने ती भारतीय माथी सन् २००७ मा आफू संगै काम गर्ने महिलाहरुमाथी हिंसा गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसको लागि उनलाई सजाय पनि सुनाइएको थियो । तर, उनले आफूमा सुधार ल्याएको, राम्रो व्यवहार गरेको कारण सजाय मिनाह गरिएको थियो ।
ती भारतीयले नागरिकताको आवेदनको चारित्रिक परिक्षणमा विगतमा आफू कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको उल्लेख गरे । तर रेकर्डमा भने सन् २००७ मा भएको घटना देखियो । उनले आवेदनमा झुट लेखेको ठहर गर्दै नागरिकताको लागि अयोग्य भएको निर्णय सुनाइएको हो ।
ती भारतीयले भने उक्त आवेदन आफ्नो वकिलले तयार गरेको र आफूले हिन्दि भाषामा सबै साँचो कुरा बताएको तर अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरिदिने अनुवादकले नगरिदिएको हुनसक्ने बताएका छन् । उनले आफू अंग्रेजी भाषामा दख्खल नभएको र परिवारलाई पहिले जानकारी नदिइ नागरिकता पाएपछि ‘सरप्राइज’ दिने योजनाका साथ नागरिकताको कागजात प्रक्रियामा परिवारका सदस्यको सहयोग नलिएका कारण आफूले यो समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन् । Source : Sbs News
अस्ट्रेलियामा नि:शुल्क खाना, डिजे र फोटोग्राफी सहितको ‘द ग्राण्ड तीज साँझ’